2013-08-18 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON Saturday, August 24, 2013 No comments
Android ဖုန်းကို ကိုယ်တိုင် အမြစ်တူးချင် ကလိချင်သူများဒီစာအုပ်လုပ်လေးကို ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်..။
Root လုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုစုံစုံလင်လင်ရှင်းလင်းပြထားပြီး...လိုအပ်သော ဆော့ဝဲလ်များဒေါင်းရန်အတွက်
လဲ Download Links တွေပါထည့်ပေးထားပါတယ်...။စက်ရုပ်စမတ်ဖုန်းကိုင်သူသူငယ်ချင်းများဆောင်ထား
သင့်တာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်...။ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Download=> solidfiles (or) dropbox (or) uppit
Window Registry အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ.. .တောင်းထားလို့ အားလုံးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....
IN Recovery Software - ON Saturday, August 24, 2013 No comments
iCare Format Recovery Pro 5.2 | 3.6 Mb
ဒါလေးကတော့ Recover Software လေးပါ။ သူကအဓိကလုပ်ဆောင်တာကတော့ Format အမှားကြောင့်
ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ Data တွေကိုပြန်ယူပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Format နှစ်ကြိမ်အထိ မှားယွင်းခဲ့
ရင်တောင် ပြန်ယူလို့ရနိုင်တယ်ဆိုထားပေမယ့် မိမိတို့အမှားကအလွန်ဆုံးတကြိမ်ထက်ပိုမိတာတော့
မကောင်းပါဘူး။တကြိမ်မှားမိတယ် ဆိုတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကိုသာအသုံးပြုလိုက်ရင် မိမိတို့ Data တွေ
Download=>tusfiles (or) davvas (or) uppit
Mirillis Action! 1.16.0 (x32 bit /x64 bit) Full With Crack
IN Screen Capture - ON Saturday, August 24, 2013 No comments
Mirillis Action! 1.16.0 | 18.8 MB
ဒီကောင်လေး ကိုအရှေ့မှတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု update version လေးရလာလို့ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်
ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်သလဲဆိုတော့ Screen ကို Video,Image ပုံစံ နှစ်မျိုးလုံး Capture ဆွဲလို့ရသလို Youtube, Facebook တို့ကိုလည်း တိုက်ရိုက် Uploadလုပ်လို့လည်းရပါတယ်။
နောက်ပြီး Game, Video, Audio တွေကို လည်းတခါတည်း Record လုပ်လို့လည်းရပါသေးတယ်
အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီလိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ.
Download (Re-new!!)=>tusfiles (or) davvas (or) solidfiles
What's new in Action! 1.16.0?
IN Photo and Media Editor Tools - ON Saturday, August 24, 2013 No comments
Ashampoo Photo Card v 1.0.0 | 189.4 MB
ဒီကောင်လေးထွက်တာက ဒီလ 21 ရက်နေ့ကတည်းက ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး Ashampoo ရဲ့ ပထမဆုံးစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ version လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးက မိမိတို့ Photo တွေကို
နောက်ခံ Frame,card ပုံစံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်လို့ရသလို နောက်ထပ် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်လို့
ရပါသေးတယ်။ Webcam ကနေတိုက်ရိုက် ပုံတွေကို ပြင်ဆင်လို့ရသလို Facebook တို့ Picasa တို့ ကိုလည်း တိုက်ရိုက် တင်လို့ရပါတယ်။
Download=>tusfiles (or) davvas (or) mightyupload
Any computer that runs one of the above operating systems. You needagraphic-card witharesolution of at least 1280 x 800.
Min. 256 MB RAM, Hard Disk Space 150 MB
Windows Mail or Mozilla Thunderbird.
IN Optimizer - ON Friday, August 23, 2013 No comments
Wise Care 365 pro v2.74 Build 216 full with keygen
IN Cleaner - ON Friday, August 23, 2013 No comments
Wise Care 365 pro v2.73 Build 215 | 8 MB
ဒီကောင်လေးကို အရှေ့မှာ အကြိမ်ကြိမ်တင်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း နောက်ဆုံးထွက် Version
လေးရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ..။ ဒီ Version အသစ်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာတဲ့Function တွေအပြင်
မိမိနှစ်သက်ရာ Theme ပြောင်းသုံးလို့ရလာတာကလည်း အမြင်ဆန်းသစ်ပြီး သဘောကျစရာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာထဲရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနှေးကွေးလေးလံစေတဲ့အမှိုက်ဖိုင်တွေ Registry Error တွေ
System ဖိုင်တွေရဲ့ Error တွေနဲ့ Boot တက်တာ Shutdown ကျတာတွေရဲ့ကြာချိန်ကို အနှောက်အယှက်
ဖြစ်စေတဲ့ Error တွေကို ရှင်းလင်းပြုပြင်ပေးတဲ့ကွန်ပျူသုံး ဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုချင်တဲ့
သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် Full Version အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်အောင် keygen ဖိုင်ပါ
IN Speed up window - ON Friday, August 23, 2013 No comments
SysTweak Regclean Pro 6.21.65.2763 | 6.5 MB
ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာ Windows System တစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိက ပင်မထိန်းချုပ်တာဟာ Registry ပါ ကျွန်တော်တို့ သုံးစွဲသူတွေကြောင့်၊ အခြား Softwares တွေကြောင့်၊ Virus တွေကြောင့် မူလ Windows
Registry တွေဟာ ပြောင်းလဲပျက်စီးလာပါတယ်.. အဲဒါကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ SysTweak Regclean Pro 6.21.65.2763 နောက်ဆုံး Update လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
IN Photo and Media Editor Tools - ON Friday, August 23, 2013 No comments
DVDFab 9.0.6.0 | 43.9 MB
9.0.6.0 ရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တာကို
Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို Crack file ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..
DVDFab HD Decrypter isacost-free and simplified version of DVDFab DVD Copy and DVDFab Blu-ray Copy which can remove almost all DVD protections except for the latest ones, part of Blu-ray protections, and copy the DVD/Blu-ray to blank disc or to the hard drive on your computer, but only in “Full Disc” or “Main Movie” mode. It is one of the always free portions of DVDFab. After the trial period or the license of DVDFab has been expired, users can use HD Decrypter for free. It can work under no-internet-connection environment, and needs ImgBurn or Nero Burning Room installed for DVD/Blu-ray copy or backup. Works asaDVD decrypter and Blu-ray decrypter , DVDFab HD Decrypter isafree Blu-ray and DVD backup tool allows you to decrypt and copy Blu-ray and DVD to blank discs or hard drive.
Changes in 9.0.6.0:
IN Cleaner - ON Thursday, August 22, 2013 No comments
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး Cleaner Software တွေဖြစ်ကြတဲ့ Ccleaner , Advanced SystemCare တို့ထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက် အပြည်နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ JetClean ဆော့ဖ်ဝဲ လေးပါ ... နောက်ဆုံး Update လေးကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။
ဒါလေးကတေယ့ Ccleaner , Advanced SystemCare တို့နဲ့ ယှဉ်ပြထားတဲ့ ပုံပါ...
JetClean gives you more than fresh, new PC feeling! Lightweight and easy to use, JetClean removes system junk files and improves your PC's performance.
One-click Clean and Tune-up cleans unnecessary files and unnecessary
Driver Finder 3.2.0.0 x86-x64 (Driver တွေ လိုအပ်နေရင် / Update မဖြစ်ရင်)
IN Driver Software - ON Thursday, August 22, 2013 No comments
မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေ Update မဖြစ်တော့တဲ့ Driver တွေကို အလိုလျောက် ရှာဖွေ ဒေါင်းယူပေးမဲ့ Driver Finder လေးပါလိုအပ်သူများဒေါင်းလော့ယူနိုင်ပါပြီ... ။
IN ဆော့ဝဲများဒေါင်းနည်း - ON Thursday, August 22, 2013 No comments
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးမှာ Download လုပ်ခြင်းနဲ့ ပက်သတ်လို့ အခတ်အခဲလေးတွေ
ဖြစ်မှာစိုးလို့ Download လုပ်နည်းလေးတွေ ပြောပြလိုက်ပါတယ်အခုဖော်ပြထားတဲ့ Download လုပ်ရမယ့်ဆိုဒ်တွေက ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာအသုံးများတဲ့ဆိုဒ်တွေဖြစ်လို့ပုံနှင့်တကွ သေချာလေးရှင်း
သွားလိုက်လိုက်ပါခင်ဗျာ....အခြားသော Website များတွင် တင်ထားသော ဆော့ဝဲများကိုလည်း
အပေါ်ကပုံမှာ Free Download နှိပ်လိုက်ရင် New Tab ထွက်လာပါတယ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ နေရာပဲဆက်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ..
IN Design Tools - ON Thursday, August 22, 2013 No comments